ओलीको पाँच ‘राजनीतिक कार्ड’ मध्ये दुई सकियो, अब कुन कुन बाँकी ? Canada Nepal
ओलीको पाँच ‘राजनीतिक कार्ड’ मध्ये दुई सकियो, अब कुन कुन बाँकी ?
काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिक फेरि अस्थिरतातर्फ अघि बढेको छ । संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्यको पुनर्संरचना भएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने विश्वास गरिएको थियो । तर, केही दिन यता सत्तारुढ दलभित्रको कुर्सीको लडाइँमा मुलुकको राजनीति फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिन थालेको हो ।
मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको भन्दै जनतासँग भोट मागेर संघीय संसदमा दुई तिहाइ मत लिएर सरकार चलाइरहेको नेकपाभित्र फेरि कुर्सीको लडाइँ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकार प्रमुखबाट हटाउन उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरु लागिपरेका छन् ।
गत फागुनदेखि ओली सरकारले दुई वर्ष पार गरेको छ । दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने अर्थात दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री फेर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस कारण फागुन उता प्रधानमन्त्री परिवर्तन बहसले सतहमै स्थान पाएन । तर, भित्र भित्र आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन आफ्नै नेताहरुलाई लागिरहको चाल पाएका ओलीले पनि सोही किसिमको तयारी गरिरहेका थिए ।
सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेसँगै फागुनबाट ओलीलाई राजीनामा दिन प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, वामदेवसहितका नेताहरुले दवाव दिँदै आए । उनीहरुले राजीनामा मागेपछि पार्टीभित्र पनि विभिन्न जटिल आरोहअवरोह आइरह्यो ।
आफ्नै नेताबाट आफूलाई घात भएको महसुस गरेका ओलीले पनि उनीहरुलाई तह लगाउन पाँच वटा राजनीतिक कार्ड प्रयोग गर्ने तयारी गरे । यसै कार्डमध्ये दुई वटा कार्ड प्रयोग गरिसकेका ओलीले बाँकी तीन कार्ड प्रयोग गर्ने धम्की प्रचण्ड र नेपाल समूहलाई दिँदै आएका छन् । दुई कार्ड प्रयोग गर्दा ओलीको समर्थनमा जनता उभिएपछि अरु पार्टीका नेतासहित नेकपाकै नेताहरु अत्तालिएको नेकपाका नेताहरुको बुझाइ छ ।
दुई कार्ड प्रयोग गर्दा राष्ट्रवादी छविलाई उँचो बनाएका ओलीले बाँकी कार्ड प्रयोग गर्दा अरु नेताहरु राजनीतिमा उठ्न नसक्ने गरी ढल्ने नेकपा उच्च स्रोतको दाबी छ । भारतीय नाकाबन्दीका खुलेर विरोध गरेका ओलीले अहिले पनि नक्सा जारी गरेर भारतीय विस्तारवादको विरोध गरेका छन् । भारतीय नेताहरुसँग शीर ठाडो बनाएर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु बोल्न सक्दैनन् भन्ने जनतामा छाप परेका बेला ओलीले भारतलाई टक्कर दिने गरी भारतद्वारा नेपालको अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरे । पाँच कार्ड मध्ये एक नक्सा जारी गर्नु थियो ।
नक्सा जारी गरेर समकालीन राजनीतिमा आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउन सफल ओलीले नेपाली महिलाको अधिकार सुरक्षित गर्न भन्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउन महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएका छन् । यो ओलीको दोस्रो कार्ड हो ।
अब बाँकी तीन कार्ड ओलीसँग सुरक्षित रहेको छ । जुन प्रयोग गर्दा ओलीइतरका नेताहरुलाई ठूलो धक्का लाग्ने नेकपा नेताहरुको भनाइ छ । आफूविरुद्ध खेल भइरहे कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्ने स्रोतको भनाइ छ ।
आषाढ १९, २०७७ शुक्रवार ०९:३९:०० बजे : प्रकाशित